Tsy mbola tena fantatra mazava hoe : iza tamin’ireo kamio maro mpitatitra tany eny an-toerana no tompon’antoka tamin’io loza mahatsiravina io satria nitsoaka sy mety efa nifangaro amin’ireo hafa. Nisy anefa ny sary niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera naneho ilay kamio vao avy nanitsaka sy ilay lehilahy maty amina toerana somary tery, saingy tsy nijanona ilay fiarabe raha ny fanamarihana. Tonga teny an-toerana nijery ifotony sy nandray an-tànana ny raharaha ny zandary. Natsahatra vonjimaika ireo kamio miasa, raha ny vaovao azo. Tokony tsy ho sarotra ny fahitana ny marina momba izay nahavanon-doza. Misokatra mazava ho azy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny mpamily, raha toa ka mbola tsy nitonon-tena.